Charles Levin (Seinfeld) ၏ရုပ်အလောင်းကိုလင်းယုန်ငှက်များ - တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ကိုက်စားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Charles Levin (Seinfeld) ၏အလောင်းကိုလင်းတများကတစိတ်တပိုင်းကိုက်စားသည်
Charles Levin (Seinfeld) ၏အလောင်းကိုလင်းတများကတစိတ်တပိုင်းကိုက်စားသည်
Charles Levin သည်ဇွန် 28 တွင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသတိပေးမှုကိုသူ့သား Jesse မှပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့အစောပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ဂူဂျွန့်လမ်းတွင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ သူ၏အလောင်းကိုဇူလိုင်လ 13 တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးရဲမှရရှိသောရဲမှတ်တမ်းအရသိရသည် Daily Mail က, 70 နှစ်၏လူရွှင်တော်လိုရှိ၏ တစ် ဦး ချောက်ထဲကျသွားပြီးနောက်သေပြီ။
အလောင်းကိုအလွန်မြင့်မားသောပြိုကွဲပျက်စီးသည့်အခြေအနေတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးချောက်ကမ်းပါးအောက်မီတာ ၃၀ ခန့်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ချားလ်စ်လီဗင်၏ကားကိုပိုမိုမြင့်မားစွာတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သူ၏ခွေးပေါက်စ Boo Boo Bear ၏အလောင်းကိုသူ၏ခရမ်းရောင်ကော်လာဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသရုပ်ဆောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခဲ့သည် အဝတ်အချည်းစည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, သစ်ပင်နှစ်ပင်ကြားတွင်, ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အပေါ်ပတ်လည်မှာငှက်ကြမ်းတပြည်၏သဲလွန်စနှင့်အတူပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမပါဘဲ, လင်းတများကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုက်စား။ သူ့ကိုသွားများနှင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သူ သေမင်း၏အကြောင်းရင်းမတော်တဆဖြစ်ပါတယ်။
Charles Levin သည်အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီး Elliot Novak အဖြစ်ဟာသဇာတ်ကား၌ပါဝင်ခဲ့သည် အဲလစ်အဆိုပါ 1980 နှစ်၏အစမှာ။ သူကရုပ်ရှင်မှာကစားခဲ့တယ် Annie Hall က Woody Allen မှ 1977 ရှိပေမယ့်လည်းစီးရီးများတွင်ပါ Seinfeld et NYPD အပြာရောင်.
တော်ဝင်ဗျာဒိတ် - Charles နှင့် Camilla သည်စစ်ပြန်များအား D-Day လုပ်ငန်းတွင်အဘယ်ကြောင့်သွေးဆောင်ခဲ့သနည်း
Jade Hallyday débarque à Paris avec trois sacs de luxe : découvrez leurs prix !
Inde: Pourquoi NEET ne parvient pas à garantir des admissions fondées sur le mérite | Inde Nouvelles
အလွဲသုံးစားမှု - ကလေးများကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း။ - ဗီဒီယို
ဂျာမနီ - Salomon Kalou သည်သမ္မတ Ouattara သို့ လာရောက်၍ ဂျာစီကိုပေးသည်
ဆွေးနွေးချက် - နောက်ထပ် Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီအားလပ်ရက်တို့၏လုံခြုံရေး - ဗီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,777
TECH & Telecom2,627